Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ, ပါဝါကားသည်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်တရုတ်နိုင်ငံ, မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူသည် Perfluorinated အရည်
ဖေါ်ပြချက်:Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ,Powered ကားသည်ဖလိုရိုဒ်ဓာတ်ဖြေရှင်းချက်,မော်တော်ကားသည် Perfluorinated အရည်,လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ > လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ, Powered ကားသည်ဖလိုရိုဒ်ဓာတ်ဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မော်တော်ကားသည် Perfluorinated အရည် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ဖလိုရင်း solvent  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီကားများအတွက်အနိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖလိုရင်း solvent  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Dielectric Coating  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီအဘို့အ Perfluorinated အရည် Powered မော်တော်ကား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်လုံခြုံသောဓာတုအရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက် အဆိုပါ fluorocarbon အရည်ပျော်ပစ္စည်းတစ်ခုအရောင်ပွင့်လင်းအရည်ဖြစ်သော perfluorocarbon သိသိအီတဲ့အရောအနှော, ဖြစ်ပါသည်, အနံ့, Non-အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် Non-မီးလောင်လွယ်။...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား ထုပ်ပိုး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်မှု: သံမဏိသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဗုံအတွက်ထုပ်ပိုး 1. အသားတင်အလေးချိန် 50Kg, 10Kg, စည်နှုန်း 1Kg ။ 2. အဆိုပါပလပ်စတစ်-စီတန်းစည်ပေါ့ပေါ့ loaded...
လီသီယမ်ဘက်ထရီကားများအတွက်အနိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖလိုရင်း solvent အဆိုပါ utility ကိုမော်ဒယ်ပါဝင်သောတစ်ခုလျှပ်စစ်ကားများအတွက်လီသီယမ်ဘက်ထရီအအေးနှင့်အပူပေးစက်ကိုတွေ့ရမှာပါ: တစ်ရေအအေး box ကိုပစ္စည်းမှာ lithium battery ကိုများထဲမှဘက်မှာစီစဉ်ပေးသောသတ္တုအပူ...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေးအရည် အခုဆိုရင်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ lithium-ion ဘက်ထရီအားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်, ထိုအပူချိန် 55 ဒီဂရီထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ lithium-ion ဘက်ထရီပျက်စီးသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်နိုင်ပါသည်။...
လီသီယမ်ဘက်ထရီအဘို့အ Perfluorinated အရည် Powered မော်တော်ကား ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ရေခဲသေတ္တာယန္တရားဟာလီသီယမ်ဘက်ထရီအအေးနှင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်အပူချိန်မှာလီသီယမ်ဘက်ထရီ၏အပူချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်တယ်, အရှင်,...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်လုံခြုံသောဓာတုအရည် ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ပါဝင်သောလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်လီသီယမ်ဘက်ထရီအအေးနှင့်အပူပေးကိရိယာ: တစ်ရေအအေး box ကိုပစ္စည်းမှာ lithium battery ကိုများထဲမှဘက်မှာစွန့်ပစ်, ပန်းကန်ပို့ချသတ္တုအပူဖြစ်၏...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက် ဓာတုအမည်: Perfluorohexene lithium ဘက်ထရီများသောအားဖြင့် device ကိုအတွင်းပိုင်းကို install နှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုချိတ်ဆက်ထားကြသည်။ "Thermal ထွက်ပြေးသွားတဲ့" ဘက်ထရီ...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ fluorine တို့ဓာတုဗေဒ set ကို 21 ရာစုအတွက်ပိုပြီးအရေးပါလာအဖြစ် fluorine တို့ဓာတုဗေဒ, တစ်ဦးဘုနျးကွီးသောအလားအလာကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ကားများ၏ဘက်ထရီ၏အအေးပေးစနစ်,...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene စွမ်းအင်သစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူလီသီယမ်ဘက်ထရီကျယ်ပြန့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုနေကြတယ်, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ,...
တရုတ်နိုင်ငံ လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ ပေးသွင်း
အပူချိန်အချက်များပါဝါဘက်ထရီများ၏စွမ်းဆောင်ရည်, အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးအပေါ်အရေးပါသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ cryogenic သိုလှောင်မှုပြက္ခဒိန်အသက်ကိုစောင့်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ကျနော်တို့ (ကိုအကောင်းဆုံးပါဝါထုတ်လုပ်မှုနှင့် input ကို, အများဆုံးရရှိနိုင်စွမ်းအင်နှင့်အရှည်ဆုံးသံသရာဘဝအောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့ဘက်ထရီစနစ်, 15-35, C ၏အကွာအဝေးအတွင်းလုပ်ကိုင်ရန်မျှော်လင့်ထား ဘက်ထရီ, ဒါပေမယ့် cryogenic သိုလှောင်မှုလျှောက်လွှာ) လူသားတွေရန်အလွန်ဆင်တူသည်အရာ, သိသာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာ၏ရေခဲသေတ္တာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိရောက်စွာအပူချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တားဆီးနိုငျသော, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ Powered ကားသည်ဖလိုရိုဒ်ဓာတ်ဖြေရှင်းချက် မော်တော်ကားသည် Perfluorinated အရည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ